Enye iQueen Cabin
Ibekwe kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide enekhefi kunye nevenkile, inkonzo yesikhokelo somlambo, isikhululo sokucoca iintlanzi kunye neendawo zokuhlambela impahla kulo ndawo. Sikuhambo olufutshane ukuya kwi-Olympic National Park, iilwandle zolwandle, imilambo, amahlathi ashinyeneyo, iindawo zokukhenketha ezidumileyo, kunye nemingxuma emikhulu yokuloba. Ngokwenene yindawo entle engqongwe bubuhle! Isilwanyana esinobubele; kukho intlawulo ye-pet ye-$ 20 ngesilwanyana ngasinye ngobusuku ekufuneka ihlawulwe xa ufika. Izilwanyana zasekhaya azishiywa zodwa nangaliphi na ixesha okanye intlawulo ye-250 yeedola iya kuhlawuliswa.
Iikhabhathi, Izindlu eziNcinane kunye neZindlu zonke zidibene kwipropathi yendawo ekuchithelwa kuyo iiholide ezinenkampu kunye neRV'ing nazo ziyafumaneka kwisiza. I-WIFI ayinakuqinisekiswa nangona sinayo ngaphandle kwentlawulo inokuba yindawo ngenxa yendawo ekude kunye nomboneleli. Ifowuni yeVerizon kuphela kwenkonzo yeselfowuni eza kubamba ulwamkelo kube kanye apha. Kungcono ukudubula iimephu kunye neeleta zamkelekile phambi kokuba ujike ku-110 oya kuthi. Indawo yokuhlamba impahla, iishawari zeendwendwe zethu zeRV kunye neekhempi zethu kwakunye nesikhululo sokucoca iintlanzi ziyafumaneka. Ivenkile ivulwa ngo-9 ekuseni ukuya ku-8pm okanye ngo-9pm (emva kwehlobo) kunye nendawo yokutyela esebenza ngo-11am ukuya ku-7pm nge-Espresso kunye ne-lattes efumaneka ngo-9am.
Izimvo eziyi-4 249